I-Digital Shoes Printer Yokuphrinta Imishini China Manufacturer
Incazelo:Best Machine Printing Machine,I-Digital Shoes Printing Equipment,Ukunyatheliswa Kwezinyawo Zendawo
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > I-Digital Shoes Printer Yokuphrinta Imishini
I-Model No.: RF-ZZ1
Lo Mshini Wokunyathelisa Wezinkampani Ezingcono kakhulu ungaphrinta ngomphumela omuhle ngezicathulo, ungaphrinta izinhlangothi, futhi. Kulula ukugcina i- Digital Shoes Printer Printing Equipment, ukhethe ngokucophelela izingxenye ngayinye kanye nomklamo ojwayelekile we-modular yizizinda zokuqinisekisa ukuqina okufanayo kwemishini eyodwa. Phakathi naleso sikhathi, ukunakwa okukhethekile kubhalwa ekukhiqizeni ukukhiqizwa ukuze kube lula ukugcinwa kwindlela yokusebenzisa. Ngakho-ke, i- Digital Shoes Printing Equipment , eyenzelwe yonke inqubo yokusebenzisa, umshini wokunyathelisa wedijithali onokuqeqeshwa okulula noma isiqondiso esikude ukuvumela amakhasimende enze ukulungiswa okuhle noma ukulungiswa ngokwabo. Umshini wokunyathelisa wedijithali awuyona umkhiqizo olahlwa kodwa umshini wokwakha umthamo, ukusebenza okuqinile nokuzinza yizihluthulelo zokudala amanani kubasebenzisi bawo.
I- Local Shoes Printing iyinhlobo ye-inkjet yokushicilela uhlobo lwe-high-tech imishini yokunyathelisa yedijithali eyenza into engeyona yokuxhumana, insimu yesicelo sayo inkulu kakhulu, kuyindlela entsha yokwenza ubuciko esandleni sokudweba, izinhlobo eziningi zokunyathelisa, ubuchwepheshe bokunyathelisa kwesikrini. I- lso ayikho isidingo sokuvikela emva kokunyathelisa, ingasindisa lo muntu; emva kokushicilela kusomile kahle, ukuphikisana kakhulu ukugqoka, ukukhwabanisa, ukuphuza utshwala, ukungena kwamanzi; iphethini inemibala, ayikho isidingo i-ICC; ngeke lixhumane ikhanda lokuphrinta uma ungasebenzisi umshini 1 inyanga, izindleko eziphelele ziphansi kakhulu. Iqaphela ngempela umqondo weqiniso weyodwa uhlamvu oluphrintiwe phezulu, akukho ukufaka ipuleti, isithombe esigcwele umbala uma usuqedile.
Uma kuqhathaniswa nezobuchwepheshe bendabuko, i-RFC digital Quick Fast T shirt Printer ikusiza ukuthi ulondoloze ukunyathelisa kwesikrini, ukunyathelisa ukushisa nokushisa nezinqubo ezenziwe zendabuko eziyinkimbinkimbi, ihlukana nokunciphisa umbala wenkinobho yendabuko, lo mkhakha uthatha ukukhiqizwa kwemishini, ukunciphisa izindleko zabasebenzi, inqubo yokunyathelisa yezindleko eziphansi, ukukhiqizwa okuphezulu, ukulahla okuphansi, imikhiqizo ephezulu efinyelelwe ngempela! Ingaveza isithombe sombala wesithombe kunoma yikuphi okubonakalayo, okumibalabala, okugqoke ukugqoka, okungahambisani nokuqeda, ngaphandle kokwenza ipuleti, inkululeko yombala, ukunyathelisa okukodwa kanye nezinye izici ukusheshisa inqubo yedijithali embonini yokunyathelisa, ukukhiqiza okukhulu okuphelele nokukhiqiza isevisi ye-100% emva kokuthengisa.
1. I-inkino emhlophe
2. Ukunyathelisa okuzenzakalelayo, akudingeki ukuba usebenzise noma iyiphi inkinobho yokuphrinta ukuze uphrinte
3. Inkinobho eyodwa-inkinobho yekhamera, ngaphandle kokusebenzisa i-syringe ukuze udwebe udoti
4. Ukuhlanza okuzenzakalelayo ukuphrinta ikhanda, asikho isidingo sokwesaba isikhathi eside iholidi.
Lena yindlela yokuphrinta ye-Best Shoes Printing Machine , okulula kakhulu ukuyifunda, sinamaqembu angaphandle okudayiswa ngemuva kokuthengisa ukukusekela.
Iphrinta ye-Digital A3 Flatbed T Shirt Xhumana Nanje
Umshini wokushicilela we-A4 we-T4 Full Color Xhumana Nanje
I-Digital Direct to Garment T-Shirt Printer Xhumana Nanje
Umshini wokunyathelisa we-Shirt we-T-sublimation Xhumana Nanje
Umshini wokuprinta wokugqoka we-T3 Shirt we-A3 Xhumana Nanje
Best Machine Printing Machine I-Digital Shoes Printing Equipment Ukunyatheliswa Kwezinyawo Zendawo Machine Printer Machine Ilogo Printed Printing Machine Machine Printer Machine Ukudayiswa coffee printing machine Ama-Photo Photo Printing Machines